Spain, muenzaniso wakashata mune inowedzerwazve chikamu | Green Renewables
Spain, muenzaniso wakashata muchikamu chinowedzerwazve
Tomàs Bigardà | | Tora co2, Renewable simba
Pamberi pe dzokororo, yakazara nhevedzano yemamiriro ezvinhu akasanganiswa pakati peiyo hupfumi, kufamba kwevanhu, shanduko yemamiriro ekunze uye tekinoroji, vatangisa shanduko yakajairika yesystem yepasi rese yesimba, uko mikana yebhizinesi, basa kana purofiti yezvehupfumi iri kushanda zvizere, kugadzira bhizinesi rakadzika. kuti makore gumi apfuura zvaive zvisingafungidzike uye zvakare, inotsigirwa uye inogamuchirwa munharaunda zvichibva pane rimwe remazita anozivikanwa ... "Kugadzikana".
Ndichiri padanho repasirese mabhiriyoni akaiswa mari mukuisa zvinowedzerwazve nezvayo zvinopfuura zvinonzwisisika mabhenefiti, uye isu tinogona kuzviona mune inotevera girafu yemushumo Ren21"Renewables 2015 - GLOBAL STATUS REPORT" rakaburitswa Zvita rapfuura.
Global kudyara, mu simba rinodzoreka uye mafuta mune dzakasimukira uye dzichiri kusimukira nyika pakati pe2004-2014 yakakura zvakanyanya. Tinoziva izvozvo España Yakaverengerwa - 2014 - pakati penyika nomwe dzinotungamira musimba rekuvandudza simba rekugadzira pasirese, nekutenda zvakanyanya kune mhepo chikamu:
Kunyangwe muchokwadi tine "Clueless", gore 2012, 2013, 2014, mukudyara muchikamu chinowedzerwazve. Tichine imwechete yakaiswa chinzvimbo. Inogona kusimbiswa mune inotevera girafu ye IRENA(International Inovandudzwa Nesimba Agency)
Zvichida kusvika parizvino, hapana mumwe wevaverengi vedu achazoshamiswa neiyo data. Isu taitozviziva izvozvo isu tiri vagadziri vakanaka ve simba rinowedzerwazve uye izvo, nekuda kwezvikonzero zvakasiyana; dambudziko, mitemo yekuzvishandisa uye zvimwe zvimwe "zvakavanzika" zvinhu, mumakore achangopfuura hatina kuisa mari yakawanda, kutaura zvishoma. Asi… Chii chinoitika kana, sezvo tisingakwanise kuburitsa imwe simba rinowedzerwazve, tichitarisa kudiwa kwekushandisa, isu tichidhonza fossil ngoro?
1 Spain uye zvinowedzerwazve muna 2015
2 Chii chinoitika kana CO2 chisi chichiwedzera
Spain uye zvinowedzerwazve muna 2015
Apa ndipo panobva chirevo chazvino kubva Spanish Magetsi Network, iyo kambani yakanyorwa pane IBEX35 yakaburitsa data rekuti takavhara sei kudiwa kwedu kwemagetsi kuSpain muna2015. Pane maviri data anomira akasimba achienzaniswa ne2015: Nehurombo, isu tadya zvishoma zvinogadziriswazve uye yakawanda yakawanda marasha uye gasi zvichienzaniswa na2014.
Kunyangwe iwo mushumo uchititaurira ... "Simba rinowedzerwazve rinoramba riine chinzvimbo chakakosha mukugadzirwa kwemagetsi zvachose asi richidonha nemapoinzi anosvika mashanu kana zvichienzaniswa negore rapfuura, rakagadziriswa nekusiyana kwemagetsi emagetsi nemagetsi, ayo gore rino anyora kuderera kwe28,2% uye 5,3%. XNUMX % zvichiteerana. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti simba remhepo rave tekinoroji ine mupiro mukuru mukugadzirwa kwemagetsi kwese peninsula mumwedzi waKukadzi na Chivabvu "
Chii chinoitika kana CO2 chisi chichiwedzera
Nekuda kwezvinhu zvekunze, mamiriro ekunze, hatina kukwanisa kuburitsa zvimwe simba mumagetsi, dambudziko rinouya ratakatofanira kudhonza mashandisiro esimba simba, izvo zvinokonzeresa yakawedzera mweya we CO2.
Nekuve neakawanda maCO2 emissions muna 2015, tichafanirwa kubhadhara zvakanyanya mukabhoni kodzero…. Zvingani? Iyo chaiyo nhamba uye ine data patafura, Hatigone kuikwereta asi fungidziro:
Sekureva kwaGreenpeace Spain: 2015. Tichafanirwa kubhadhara anopfuura mamirioni zana emamiriyoni ekuwedzera mune kodzero dzekabhoni dzemamiriyoni gumi nemana ematani eCO14 nekuda kwekupinda kukuru kwemarasha (+ 2%) uye gasi (+ 22%).
Zvinoenderana neNyika: Pakati pa2008 na2012 akashandisa anopfuura mamirioni mazana masere kutenga kodzero ye CO2.
Kukosha kwemweya wetsvina kunogona kubvunzwa gore rega rega mupepanhau El Economista, uye mutengo wavo unowedzera gore rega rega.
Pasinei nekuti tinoda here bhadhara zvakanyanya kana zvishoma. Dambudziko chairo renyaya, mukunzwisisa kwedu, ndeyekuti mamirioni ezvakawandisa atinogona kubhadhara kuwedzera kwekubuda kwe CO2 inosangana neyekugadzira magetsi (Gore ra2015), vachaparadzwa, uye havana kudzoka. Mamiriyoni ese aya anogona kupihwa mari muna 2012, 2013 na2014 kuwedzera kugadzirwa kwesimba rinowedzerwazve.
Saka, Kana na 2015 tanga tatova nekusafarira nemagetsi maererano ne "yakachena" simba, isu tinofungidzira 2016 na 2017 mune imwechete tsinga. Kunyangwe kana kwete zvichikonzerwa neshanduko dzakanyanya mumamiriro ekunze dzatiri kusangana nadzo kana nekuda kweyakareruka chokwadi yekuti nzanga irikudya magetsi mazhinji.
Kunyangwe gore rino simba rinoenderana rine simba rinofarirwa, izvo zvandisina chokwadi nazvo, zvichipiwa mafambiro ePP nemaCitizens, mhedzisiro inogona kugadzirwa yesimba kugadzirwa ingadai isiri munguva pfupi. Sezvo paki nyowani kana nyowani yezuva chirimwa hachisi chirongwa chinomhanya kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Spain, muenzaniso wakashata muchikamu chinowedzerwazve
EU inodaidzira tsananguro kubva kuSpain nezve zvipingaidzo kumagetsi kuzvishandisa
Eco-hunyanzvi hwekushandisa simba muzvivakwa